२o७५ भदौ २३ शनिबार
म भ्रममा अलमलिएको छु,
यहाँ शब्द अनेकार्थी छन,
अक्षर अनेकार्थी छन,
सामाजिक संजालबाट टाढा,
ईन्टरनेटमा पनि भ्रम छ,
के सहि रु के गलत ?,
यहाँ उत्तर दिन आवश्यक कोहि ठान्दैन,
न त प्रश्ननै बुझाउन,
मैले सहि बुझिरहेको छु कि गलत,
मलाई त्यो पनि थाहा छैन,
तर म अशावादी छु,
कसैले मलाई संक्षिप्तमा बुझाउँछ,
अनि हट्नेछन भ्रमहरु,
म खोजीरहेको छु उत्तर, गल्ती कसको ?
बुझ्न नसक्ने म कि बुझाउन नसक्ने प्रहरी प्रशासन ?
कि कहिलेकाही स्कुटरमा पिप-पिप पार्दै,
हर्न बजाउँदै दर्शन दिने विद्वानको ?
र पुन भ्रमलाई अँगाल्दै,
म टोलाउँछु आफ्ना भ्रमित दिनहरु प्रति,
काठमाडौँ । नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको ६२ औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित राष्ट्रिय कविता महोत्सव २०७६ मा धादिङका हेम प्रभास प्रथम भएका छन् । उनले ‘प्रदेश गएका पतिका नाममा’ शीर्षकको कविता प्रस्तुत गरेका थिए